Vondron-tsivan'ny mpankafy FFU Factory | China FFU mpankafy fanivana singa mpanamboatra, mpamatsy
passbox / transfer windows
plastika mandeha anaty rano PVC -...
plastika mandeha anaty rano PVC ...
Alumina azo soloina azo soloina ...
baoritra boaty boaty taratasy p ...
rivotra voalohany indrindra-metaly harato f ...
v-karazana fahombiazan'ny medium v ​​...
paosy kitapo fanadiovana rivotra med ...
fahombiazan'ny salantsalany fisarahana ...
sivana rivotra avo lenta
outlet avo fahombiazana amin'ny ...
V- miendrika fahombiazana avo f ...
partiton pleat efficie avo ...
karazana tanky tsy mizarazara hig ...
Alumini vaovao avo lenta ...
PVC lamba na aluminium rapi ...
holllow roa glazing clea ...
efitrano madio mandeha amin'ny herinaratra ...
namboarina alu alimo fra ...
tontonana resina melamine madio ...
mandeha ho azy automatiora avo Qual ...
Karazan-tohatra vita mialoha ...
tasy mafana nandroboka mafana ...
tariby metaly nandrendrika ...
Tselatra inuslated PVC
ambany na antonony malefaka overh ...
3 core 4 core insulpe XLPE ...
Water-proof 9W 18W 25W LED ...
T karazana hazavana keel
LED fampidirana braket ligh ...
Mitsitsy angovo 150W 250W 400 ...
volonondry sandwich vita amin'ny volon'ondry wi ...
Kilasy fihodinana ambany amin'ny kilasy 1 ...
Kilasy fitsitsiana angovo 1 ...
Tasy fitehirizana angovo 1 ...
takelaka gusset aluminium miantona ...
180V ~ 220VAC firaka aliminioma ...
70W 100W 150W malefaka lehibe ...
Class 1 kilasy 0 plastika ...
18W 40W 80W nijanona LED SM ...
Valo-porofo mando-rano tri -...
hazavana mahery tsy misy vovoka 14W ...
Kilasy 1 14W 18W 28W inverte ...
14W 28W 18W hazavana fonosana w ...
fipoahana-porofo & anti-t ...
hazavana mikraoba ultraviolet
mangatsiaka vy mangatsiaka nanakodia ...
jiro madio ara-pahasalamana ho an'ny med ...
kilasy 1 recessed type clean ...
hazavana madio madio ambaratonga 1
fiakarana miverina ambaratonga 1 na ambany ...
firaka alimina alim-bary mandry ...
400mm 500mm anaty ...
therma tsy misy afo mirehitra ...
mafana naroboka zinc nopetahany galv ...
miloko mifono GI GL PPGI PPG ...
coil vy mangatsiaka mihodina ...
manohitra ny rantsan-tànana GL galvalume st ...
manezioma oxysulfate sandwi ...
tantely tantely vy ...
taratasy tantely tantely afo ...
tantely maivana maivana ...
sandwich tantely aluminium ...
50mm 75mm 100mm hatevin'ny p ...
fasika vita amin'ny vato silika tsy may afo ...
birao MGO tsy misy afo mirehitra magnesi ...
75mm 50mm mirehitra afo ...
Windows miaraka amin'ny magneti manual ...
Fanafody hopitaly fitsaboana ...
varavarana vy madio
Slidin mandeha ho azy namboarina ...
Fitsaboana ara-barotra indostrialy ...
Efitra madio fonosana efitrano ...
Aluminium tena tsara kalitao ...
Jiro nalevina namboarina OEM ...
2020 Kalitaon'ny taratasy avo ...
China Manufacturer ho an'ny Viny ...
2020 Tsara kalitao Dynamic E ...
Fampisehoana mihosin-drakitra avo lenta ...
18 taona namboarina trano ...
OEM namboarina Electrostati ...
Factory Free santionany Steel F ...
Fanadiovana mafana mora amin'ny orinasa ...
2020 Fiberglas tsara kalitao ...
Sampana maimaim-poana ho an'ny Steel Safet ...
Sina vidiny mora Ahu Air C ...
Manakatona ny vao tonga ...
azo soloina azo ovaina alim-pito vita amin'ny alimina alimina
Ny sivana dia mampiasa kofehy synthetic polyester vaovao ho toy ny fitaovana sivana, aorian'ny famolavolana, manana fahombiazan'ny filtration avo lenta izy, fahaiza-mitazona vovoka lehibe, ary fanoherana ambany miaraka amin'ny sivana azo soloina, vidin'ny fandidiana ambany sy endri-javatra hafa.
non-partition tank karazana sivana mahomby be
Tsy misy sivana mivaingana azo apetraka noho ny fampiasana fitaovana manokana famehezana toy ny gel.
partiton pleat fahaiza-miasa mahomby be sivana HEPA ho an'ny teatra fanafody famokarana efitrano elektronika
Ny sivana dia mandray taratasy vita amin'ny vera tena tsara ho toy ny akora, ary ny taratasy offset ho toy ny tabilao fizarazarana, miforona amin'ny boaty vita amin'ny vy, alimo aluminium ary lakaoly. Ity vokatra ity dia manana fiasa mahomby amin'ny filtration, fanoherana ambany, fahaizan'ny vovoka lehibe ary vidiny ara-toekarena. Ampiasaina be izy io amin'ny fanadiovana ny rivotra amin'ny ankapobeny amin'ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny ankapobeny, ny rafitra fanadiovan-drivotra ary ny rafitra famatsian-drivotra madio. Amin'ny ankapobeny, ny maripana manodidina dia latsaky ny 60 degre. Ny fatran'ny sisin-tany dia boaty vita amin'ny vy sy alim-by.
V- sivana fahombiazana avo lenta
Volavola miendrika V miaraka amin'ny sivana pleat mini indrindra, misy faritra sivana betsaka noho ny sivana nentim-paharazana. Ny faritra sivana lehibe dia afaka mitantana habetsahan'ny rivotra lehibe kokoa, mitazona fihenan'ny tsindry ambany ary manitatra ny androm-piainan'ilay sivana. Fitaovana sivana: ny fitaovana sivana dia mampiasa kofehy fitaratra superfine izay tafangona ao anaty fefy amin'ny alàlan'ny firotahana. Ny taratasy sivana dia sarahina amin'ny adhesive mafana miempo, ary be mpampiasa amin'ny rivotra sy ny saha hafa izay misy fepetra takiana amin'ny rivotra.
fivoahana avo lenta miaraka amin'ny fisarahana tsy misy fizarana rivotra
Izy io dia be mpampiasa amin'ny famatsian-drivotra amin'ny faran'ny zavamaniry madio, toy ny: fanafody, fitsaboana, sakafo, elektronika, firakotra mazava tsara ary indostria hafa.
Ny vokatra dia mampiasa famatrarana mekanika, ary ny fitaovana boaty dia takelaka mangatsiaka GB.
Ny fitsaboana amin'ny boaty dia mampiasa spray fosidasiana, miaraka amin'ny fanoherana mahery vaika mahery.
Ny serivisy serivisy avo lenta FL dia mampiasa fibre fitaratra ultrafine ho toy ny taratasy sivana, foil aluminium ho mpizara, ary vy tsy miova toy ny endriny. Nasiana tombo-kase izy io ary nasiana fingotra avo lenta nafarana. Ny sivana tsirairay avy dia nandalo fitsapana henjana niaraka tamin'ny fahombiazan'ny filtration avo lenta, fanoherana ambany, fahaizan'ny vovoka lehibe ary fanoherana ny hafanana avo. Izy io dia natao indrindra ho an'ny fitaovana sy rafitra fanadiovan-drivotra avo lenta izay mitaky ny tsipika famokarana avo lenta toy ny fanamainana
sivana mahomby fizarana mpanelanelana
Ny sivana dia mandray partition matevina miendrika L. Aorian'ny famoronana dia manana fahombiazan'ny filtration avo lenta izy, fahaiza-mitazona vovoka lehibe, haben'ny rivotra sivana avo sy endri-javatra hafa. Ampiasaina be izy io amin'ny fanadiovana ny rivotra amin'ny ankapobeny amin'ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny ankapobeny, ny rafitra fanadiovan-drivotra ary ny rafitra famatsian-drivotra madio. Ny mari-pana amin'ny ankapobeny ambadiky ny fampiasana dia latsaky ny 80 degre. Ny fatran'ny sisin-tany dia fefy mitafo vy, firafitra aliminioma ary fefy vy tsy misy fangarony.
kitapo kitapo rivotra fanadiovana antonony fahombiazan'ny sivana fibre synthetic
Ny sivana dia mandray kofehy synthetic tsy misy tenona vaovao (ny sivana dia manome fahombiazan'ny 60-65%, 80-85%, 90-95% sy ny hafa), aorian'ny famolavolana azy, manana fahombiazan'ny filtration avo lenta izy, fahaiza-mitazona vovoka lehibe, fanoherana ambany, ambany ny vidin'ny fandidiana sy ny fiasa hafa. Ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovan-drivotra rivotra ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny ankapobeny, ny rafitra fanadiovan-drivotra ary ny famafazana ny rafitra famatsian-drivotra vaovao, azo ampiasaina ho toy ny sivana mialoha ny sivana avo lenta ihany koa izy io mba hanitarana ny androm-piainany. Ny mari-pana amin'ny ankapobeny ambadiky ny fampiasana dia latsaky ny 80 degre. Misy andian-dahatsoratra roa sisin-tany: ampahany mivalona vita amin'ny vy sy alimo aluminium.
v-karazana fahombiazana antonony v sivana rivotra banky
Ny sivana dia mandray ny sivana V-BANK amin'ny fampisehoana antonony (ny sivana dia manome fahombiazan'ny
60-65%, 80-85%, 90-95% sy ny hafa), aorian'ny fananganana dia manana fahombiazana avo lenta, fahaiza-mitazona vovoka lehibe, fahaizan'ny filtration rivotra be sy endri-javatra hafa. Ampiasaina be amin'ny fanadiovana ny rivotra amin'ny ankapobeny amin'ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny ankapobeny, ny rafitra fanadiovan-drivotra ary ny famafazana ny rafitra famatsian-drivotra vaovao, azo ampiasaina koa izy io ho toy ny sivana mialoha ny sivana mahomby indrindra hanitarana ny androm-piainany. Ny mari-pana amin'ny ankapobeny ambadiky ny fampiasana dia latsaky ny 80 degre.
sivana metaly voalohan'ny metaly rehetra
Ho an'ny fitaovana sivana, misy kofehy vita amin'ny vy na alim-pito vita amin'ny onja miampita sy marindrano. Ny haben'ny fenon'ny hateviny dia 1 santimetatra sy 2 santimetatra. Ho an'ny fitaovana vita amin'ny boaty, azonao atao ny misafidy volo vy na alim-baravarana alimina izay mety amin'ny fitaovana entona indostrialy miaraka amin'ny fihenan'ny tsindry ambany sy ny fanangonana vovoka avo. Mora ny manadio sy mitazona azy ireo, mitsitsy vola.
baoritra baoritra boaty sivana voalohany fibre synthetic rivotra
Ny sivana dia mampiasa fibre synthetic sy fibre fitaratra vaovao ho toy ny fitaovana sivana, aorian'ny aforitra, manana fahombiazan'ny filtration avo lenta izy, fahaiza-mitazona vovoka avo, fanoherana ambany ary endri-javatra hafa. Ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovan-drivotra madio ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny ankapobeny, ny rafitra fanadiovan-drivotra ary ny famafazana ny rafitra famatsiana rivotra madio, azo ampiasaina koa izy io ho toy ny sivana mialoha ny sivana fahombiazan'ny medium mba hanitarana ny androm-piainany. Amin'ny ankapobeny ny mari-pana manodidina ny fampiasana dia latsaky ny 93 degre.